Lafta Gareen oo shaaciyey inay muhiim tahay in la dhageysto tabashada A/Madoobe & Deni | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Lafta Gareen oo shaaciyey inay muhiim tahay in la dhageysto tabashada A/Madoobe...
Lafta Gareen oo shaaciyey inay muhiim tahay in la dhageysto tabashada A/Madoobe & Deni
Cabdicasiis Xasan Maxamed (Lafta Gareen) Madaxweynaha dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliyaoo oo maanta magaalada Baydhabo ka daah-furay shirka wadatashiga ee Madaxda KGS, Hirshabelle iyo Galmudug ayaa khudbad ka jeediyay shirkaas.
Lafta-gareen ayaa marka hore waxaa uu sheegay inay soo dhaweynayan qodobadii ka soo baxay shirkii Dhuusamareeb-3 ee go’aanka looga gaaray doorashada 2020/21.
Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray inaymuhiim tahay in la dhageysto tabashooyinka ay qabaan Madaxweyneyaasha Jubbaland iyo Puntland.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa sidoo kale sheegay in shirkooda gaarka ah markii uu dhammaado ay u soo ambabixi doonaan Magaalada Muqdisho, si ay uga qeyb galaan shirka maalinta berri ah ka furmaya Caasimadda.
Ugu dambeyn Madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta-gareen ayaa waxaa uu sheegay in shir looga hadlayo Arrimaha amniga ay bisha soo socota yeelan doonaan Madaxweyneyaasha Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Maqaal horeShirka wada-tashiga Baydhabo oo goor dhow furmay+Sawirro
Maqaal XigaMadaxweyne Lafta Gareen, Qoor Qoor & Waare oo soo gaaray Muqdisho